Boya Workshop - Yixing Boya Waxyaabaha Cusub ee Teknolojiyada Co., Ltd.
Sideen u soosaaranaa alaabo tayo sare leh?
Wax soo saarka tayada sare leh ayaa ah qodobka ugu muhiimsan ee shirkadu ay waqti dheer ku qaadan karto. Waxaa naga go'an inaan macaamiisha u fidino tayo, caafimaad, badbaado iyo baakad dhaqaale si loogu daro qiimaha badeecadaada.
Qaab dhismeedka lakabyada badan, shaqada wax soo saarka ayaa si fudud loogu soo qaadan karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisheena iyadoo la beddelayo qalabka lakabka saxda ah. sida PE, PA, EVOH, PP ect;
Nidaamka xakamaynta dhumucda otomaatiga ah, oo leh nidaamkeena xakamaynta dhumucda otomaatigga ah ee sareeya waxaad heli kartaa dhumucda saxda ah ee aad u baahan tahay!
Hufnaan sare, Marka laga reebo filimka dharbaaxo waxaan sidoo kale ku siin karnaa filim biyo tirtiray oo leh caddayn gaar ah.
Waxaan aaminsanahay: qalab sax ah, waara oo horumarsan ayaa sameyn kara wax soo saar tayo fiican leh.
Nidaamka adag ee QC
Maxaan kuugu balanqaadi karnaa qiimo tartan ah?
Boya gebi ahaanba waxay leedahay 15 qalab isku-dhafan, mid ama laba qalab kasta oo diiradda saaraya hal shey oo leh maareeye go'an oo in ka badan 10 sano khibrad u leh dayactirka mashiinka .Qabkan waxaan ku horumarinay wax soosaarka isla markaana waxaan u dhimeynaa kharashka sidoo kale waqtiga ilaalinta. Dhammaan kharashka aan keydinnay waxaa la siiyaa macaamiisheenna.